Bacda kaydinta jirridda kursiga dambe: sanduuqa kaydinta kursiga danbe ee laalaabi karo, ku haboon baabuurta, baabuurta xamuulka qaada, jeeps ama sanduuqa baabuurka weyn ee SUV iyo sanduuqa bacaha cuntada
Sanduuqa Kaydinta Baabuurta
Badeecadahayadu waa kuwo u gaar ah qaabaynta, wax badan oo sahlan in la isticmaalo. Nooc kastaa waa mid gacanta lagu sameeyay oo waara, taas oo ku kordhinaysa fududaynta gaadhigaaga. Dhamaystirka jirridda culeyska culus ayaa kaliya laga sameeyay agabka ugu fiican, sababtoo ah waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxaysan karto sanadaha soo socda. Waxay ka samaysan tahay 600 denier polyester. Sababtoo ah darbiga dhinaca adag iyo saxanka hoose, waa mid waara oo aad u adag, waxayna ilaalin doontaa qaabkeeda.
Haddii aad u dirto carruurtaada dugsiga, aad dukaanka raashinka si aad si dhakhso ah wax uga soo qaadato ama aad ka qaybgasho shirarka ganacsiga, dhammaan hawlahan maalinlaha ah waxay u baahan yihiin inaad wax ku kaydiso baabuurka. Hadda, dhibka kaliya ayaa ah in waxyaabaha ka dambeeya ay noqdaan kuwo aad u jahwareersan, kuwaas oo laga yaabo inay la mid yihiin meelaha ay musiibadu ka dhacday. Miyaad ka daashay dhammaan daadinta iyo qaska si fudud ugu fuula jirridda gaadhigaaga? Ma jiro wax ka dhib badan in la maqlo dhammaan raashinka lagu daadiyay jirridda waddada. Hadday sidaas tahay, waxaad u baahan tahay qabanqaabiyaha laf dhabarta! Qabanqaabiyaha ugu weyn wuxuu leeyahay qol weyn oo ballaadhan, kaas oo si fudud u qaadi kara qalabyo kala duwan. Jeebabka saafiga ah ee dibadda ah iyo jeebabka daboolka ayaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo alaabta yaryar. Hadda uma baahnid inaad rogto waxyaabo badan si aad u hesho halka ay ku duugan yihiin. Marka aanad u baahnayn qabanqaabiye, waxaad u rogi kartaa bac lagu kaydiyo. Dhamaystirka jirku wuxuu ka samaysan yahay dharka sare ee 600D Oxford, iyo gidaarka dhinaca iyo saxanka hoose ayaa ah mid aad u xoog badan, kaas oo xamili kara inta badan xagashada oo ilaalin kara qaabdhismeedkiisa adag, dhib ma leh! Baabuur nadiif ah waa baabuur faraxsan! Markaa ha sugin, hel qabanqaabiyaha ugu weyn oo bilow abaabulka! Haddii aad qabto wax arrin ah oo ku saabsan qabanqaabiyaha jirridda, xor u tahay inaad nala soo xiriirto
Hore: Daboolka Kursiga Tayada Sare
Xiga: Baabuurka Electrostatic Film Side Block
Sanduuqa Abaabulaha Suv
Sanduuqa jirridda Suv
Sanduuqa Qabanqaabiyaha jirridda